Nitokona teny amin’ny HJRA : manome 24 ora ho an’ny fanjakana ny mpiofana ho mpitsabo | NewsMada
Nitokona teny amin’ny HJRA : manome 24 ora ho an’ny fanjakana ny mpiofana ho mpitsabo
Manome 24 ora ny minisitera tomponandraikitra hanefa ny tambin-karama enim-bolana ho azy ireo ny mpiofana ho mpitsabo izay nitokona nanoloana ny HJRA omaly maraina. Mbola nanao « service minimun » ho an’ny sampana famelomana aina ny ampahany tamin’ny mpiofana ho mpitsabo, omaly. Aorian’ny 24 ora, hivory indray ny mpiofana rehetra ary hanapaka ny tohin’ny fitakiana raha tsy manome valin-teny mahafa-po ny fanjakana. Efa nitafa tamin’ny mpiandraikitra ao amin’ny minisitera izy ireo ary nampanantenaina fa hozaraina mialoha ny fetin’ny Paska ny vola. Hatramin’izao, tsy nisy karama voaray ka nanao izao hetsika fanairana izao ny mpiofana.
Mampihodina ny toeram-pitsaboana ny mpiofana ho mpitsabo satria mandray ny marary miaraka amin’ny mpitsabo ary afaka manoratra ny taratasim-panafody aorian’izay. Tsy eto Antananarivo ihany, mihetsika koa ny mpiofana ho mpitsabo any amin’ny faritra rehetra, iraisana ny fitakiana ny tambin-karama. Efa nampanantena vola karama telo volana ny minisitera fa tsy nanaiky izy ireo. « Olona manambady aman-janaka ny ankamaroanay ary sahirana fa tsy misy intsony ny vola hatao saran-dalana sy sakafo any am-piasana ka hatsahatra ny asa raha tsy mivaly ny fitakiana », hoy ny fanambaran’ny filohan’ny Association des internes de Madagascar (AIM), Hery Xavier Perez, omaly teny Anosy.
Tsy mianatra intsony fa efa miasa tsy mitsahatra ny mpiofana ho mpitsabo eny amin’ny hopitaly. 800 eo ho eo izy ireo eto Antananarivo ivondronan’ny 7ème sy 8ème année ary ny interne qualifiant.
Momba ny raharaha nahasaringotra ny mpianatra ho mpitsabo mikasika ilay reny maty tao amin’ny Maternité Befelatanana, miandry ny tohin’ny fanadihadiana ny rehetra satria naverina teny anivon’ny BC ny famotorana.